Amamojula wokuhlanza we-Ultrasonic weWire, Tube ne-Cable - Hielscher Ultrasound Technology
I-Hielscher ikhiqiza izinhlelo zokuhlanza ama-ultrasonic ukuze kususwe ukungcoliswa, njengamafutha okugcoba, ukudweba amafutha, uthuli, ukungcola, insipho noma i-stearate emaphrofayli aqhubekayo, afana ne-wire, tube, umugqa wendiza noma ikhebula.
I-USCM – Isistimu Yokuhlanza Modular
Uchungechunge lwe-USCM lwakhiwe njengezinombolo zamamodeli wokuhlanza. Amamojula ngayinye we-USCM ku-self-contained container unit yokuhlanza elungele ukusebenza kwe-plug-and-play. Amamojula we-USCM atholakala ngobude obuhlukahlukene phakathi kuka-600 no-2000mm. Ukuze kusetshenziswe ama-multi-stage yokuhlanza noma ukuhlanza, ungahlanganisa amamojula amabili noma ngaphezulu e-USCM emgqeni. Izidingo zakho zokuhlanza zizochaza ubude nokucushwa kwalesi simiso sokuhlanza esivumelana kakhulu. Uma uhlela ukuthuthukiswa kwejubane elizayo esikhathini esizayo (ukungena kokuphuma kwe-bottlenecking), ungathenga imodemu yokuhlanza ngezintambo ezisele, ukuze ukwazi ukwengeza izinhloko ze-sonic kamuva. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukwengeza enye imodi yokuhlanza ye-USCM emgqeni, uma uyidinga.
Ultrasonic wire ukuhlanza kuyinto contact-kancane, kodwa mechanical yokuhlanza indlela. Isebenzisa i-cavitation ye-ultrasonic. Ngakho-ke, kudinga amakhemikhali amancane, angaphansi kanzima noma angekho. Lokhu kwenza ukuhlanzwa kwe-ultrasonic okunye okunye okunemvelo kuya ejwayelekile ye-asidi noma yokuhlanzwa kwe-solvent. Amanye amaklayenti asebenzisa amanzi, njengama-DI amanzi kuphela. Lokhu kulungele ukudlala ibanga noma izintambo zezokwelapha. Yiqiniso, ukusebenzisa amakhemikhali amabi kakhulu kwenza ngcono ukuphepha emsebenzini, futhi.
Amamojula we-USCM akhiwa ngensimbi engagqwali ukuze agcine iminyaka eminingi yokusebenza. I-module ngayinye ihlanganisa ukuhlanzwa okukhulu kwe-ultrasonic, ukuhlunga okuketshezi, ukushisa nokuphefumula nokuphefumula emoyeni ukuze kume.
Izinhlelo zokuhlanza ze-Hielscher ze-USCM zingakwazi ukucubungula amaphrofayli e-inthanethi ngesivinini somugqa ohlukahlukene kuze kube ngu-200m / min, kalula. Ngama-diameter ahlukaniswe ngamaphesenti angaphezu kuka-25mm kanye nokuhlanzwa kwe-multi-wire, sinezixazululo ezizenzekelayo. Sicela uxhumane nathi ukuze uthole olunye ulwazi!
Le vidiyo ibonisa i-USCM600 kanye ne-USCM1200 eyenzelwe ukuhlanzwa kwe-ultrasonic in-line kwezintambo ezimbili ezifanayo.
Izinhlelo ze-Ultrata zokuhlanza i-USCM600 kanye ne-USCM1200 zisetshenziselwa ukuhlanza okusebenzayo nokushesha kwezinto ezingapheli, isb wire, intambo, induku kanye ne-tepi.
Ultrasonic Wire Ukuhlanza USCM600 & USCM1200
Sicela uxhumane nathi! Sizojabula ukukusiza.
Sicela ufake imininingwane yakho yokuxhumana kwifomu ngezansi. Sicela unikeze ulwazi mayelana nobukhulu bephrofayili kanye nempahla, isivinini somugqa, ukungcola, imikhawulo yesikhala, izidingo zokuhlanzeka kanye nenqubo yentuthuko ngaphambi nangemva kwesiteshi sokuhlanza. Lokhu kuzosenza sikwazi ukukusiza kangcono. Ngiyabonga!
Ukuhlanzwa kwe-ultrasonic kunoma iyiphi into
Amamojula wokuhlanza ase-USCM angasetshenziselwa zonke izinhlobo zamaphrofayela, njengethusi, aluminium, ezingenasici, ithusi, i-glass fiber, izinsimbi ezifakiwe. Amanzi okuhlanza okujwayelekile angama-NKULUNKULU amanzi noma amanzi anama-low concentrations we-neutral detergent, i-alkaline noma i-acidic cleaner.
Tape noma Strip
Amanye Amaphrofayli Aqhubekayo
Amafutha noma amafutha
Uthuli noma Udoti
Ngokulandela inqubo yokudweba ucingo
Ngemuva kokumisa, Ukufometha noma ukuvula
Okulandelayo esiteshini se-Pay-Off
Ngaphambi kwe-wire extrusion
Isiteshi esivela kabusha seRe-Coiling
Ubukhulu obujwayelekile be-USCM
Izakhi zohlelo lokuhlanza
Iziqondiso zezinsimbi ze-Ceramic
Ukuhlanza iTank Liquid
I-Hot Air Dryer
USCM600 ngamabhulashi ajikelezayo